ရွှေဥဒေါင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
(1889-10-24)၂၄ အောက်တိုဘာ၊ ၁၈၈၉
ဧချိုင့် (ဝါးတန်း) မန္တလေးမြို့
(1973-08-10)၁၀ ဩဂုတ်၊ ၁၉၇၃
ကမ္ဘာကျော်ဝတ္တုကြီးများ ဘာသာပြန်ခြင်း၊ မြန်မာမှုပြုခြင်း၊ အတွေးအခေါ်နှင့် ဘာသာရေး စာပေများ ရေးသားမှု ကျော်ကြားခြင်း၊ စံထားလောက်ဖွယ် စာရေးဟန်သည် ရှင်းလင်းပြေပြစ်ခြင်း
အဖ - ဦးဧရာ ၊ အမိ ဒေါ်ရွှေ
ရွှေဥဒေါင်း (၁၈၈၉- ၁၉၇၃) သည် မြန်မာနိုင်ငံသား စာရေးဆရာ ဖြစ်ပြီး ကျောင်းဆရာ၊ သစ်တောစာရေး၊ တောလိုက်စာရေး၊ မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာ၊ သတင်းစာအယ်ဒီတာချုပ်အဖြစ် ကျင်လည်ခဲ့သည်။ ပင်ကိုရေး၊ အမှီးနှင့် ဘာသာပြန်ဝတ္ထုတိုရှည်များ၊ ဗုဒ္ဓဝါဒ၊ တွေးခေါ်မြော်မြင်ရေး၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်များ ရေးသားခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် စုံထောင်မောင်စံရှား အမှီးဝတ္ထုများ၊ တစ်သက်တာမှတ်တမ်းနှင့် အတွေးအခေါ်များ၊ ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ လက်တွေ့ကျင့်စဉ် စာအုပ်များမှာ ထင်ရှားသည်။ မြန်မာစာပေနယ်တွင် အမှီးဝတ္ထုပုံစံကို ထူးချွန်ပြောင်မြောက်စွာ တိုးချဲ့ဆန်းသစ်ခဲ့သည်။ ရရှိခဲ့သည့် စာပေဗိမာန်ဆုများမှာ မျှော်တလင့်လင့်ဖြင့် ၁၉၅၂ ခု ဘာသာပြန်ဆု၊ သွေးစုပ်မြေဖြင့် ၁၉၅၅ခု ဘာသာပြန်ဆု၊ တစ်သက်တာမှတ်တမ်းနှင့် အတွေးအခေါ်များဖြင့် ၁၉၆၁ ခု သုတပဒေသာဆုများ ရရှိခဲ့သည်။
၅ ရွှေဥဒေါင်း ရေးသား ထုတ်ဝေ ခဲ့သော စာအုပ်များ စာရင်း
၆ ရွှေဥဒေါင်း ရေးသား ထုတ်ဝေ ခဲ့သော စာအုပ်များ စာရင်း (မူကွဲ
ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်းသည် ၁၂၅၁ ခု၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၂ ရက် (ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၈၉ ခု၊ အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်) ကြာသပတေးနေ့တွင် ဖွားမြင်သူ ဖြစ်သည်။ မန္တလေးမြို့ ဧချိုင့် (ဝါးတန်း) ရပ်ကွက်တွင် ဖွားမြင်၍ မိဘနှစ်ပါးမှာ ဦးဧရာနှင့် ဒေါ်ရွှေတို့ဖြစ်သည်။ ဆရာကြီး၏ အမည်ရင်းမှာ ဦးဖေသိန်း ဖြစ်သည်။
ဖခင် ဦးဧရာသည် သီပေါမင်းလက်ထက်တွင် လွှတ်တော်စာရေးအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့ဖူးသည်။ ကိုလိုနီခေတ်တွင် ဖိနပ်ထောင်ဆရာအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုသည်။ မိခင် ဒေါ်ရွှေသည်လည်း သီပေါမင်း လက်ထက်တွင် စာတော်ဖတ်အဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့ဖူး၍ တနင်္ကသီ ရွာစားဘွဲ့ပင် ရခဲ့ဖူးသည်။ သီပေါမင်း ပါတော်မူပြီးနောက် ဦးဧရာနှင့် ဒေါ်ရွှေတို့ ဖူးစာဆုံပြီး ဆရာကြီးကို ဖွားမြင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆရာကြီးသည် မန္တလေးမြို့ ဗုဒ္ဓဘာသာသီလရှင်ကျောင်းတွင် စတင်ပညာသင်ကြားသည်။ ထို့နောက် လူကျောင်း၊ မန္တလေးမြို့ ဒက္ခိဏဝံတိုက် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ အေဘီအမ်ကျောင်းတို့သို့ အဆင့်ဆင့် ပြောင်းရွှေ့ ပညာသင်သည်။ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၉ဝ၈ ခုတွင် ကာလကတ္တား တက္ကသိုလ် အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲကို အောင်မြင်သည်။ ထို့နောက် မန္တလေး ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းနှင့် အေဘီအမ်ကျောင်းတို့တွင် ကျောင်းဆရာ လုပ်သည်။ ထို့နောက် ရွှေဘိုအရေးပိုင်ရုံး၊ သစ်တော်ရုံး တို့၌ စာရေးလုပ်သည်။ ထို့နောက် မန္တလေးမြို့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် သမဝါယမမင်းကြီးရုံး၌ တောလိုက်စာရေး ဝင်လုပ်ပြန်သည်။ တောလိုက်စာရေးဘဝ အသက် ၂၁ နှစ်တွင် ပထမအကြိမ် အိမ်ထောင်ကျသည်။ ၃ နှစ်ခန့် ပေါင်းသင်းပြီးနောက် အိမ်ထောင်နှင့်ကွဲသည်။ ၁၉၁၄ ခုနှစ်တွင် အလုပ်မှနုတ်ထွက်ပြီးနောက် ဒုတိယအိမ်ထောင်နှင့် ဖူးစာဆုံသည်။ ၁၉၂ဝ ပြည့်နှစ်တွင် ဒုတိယ အိမ်ထောင်နှင့် ကွဲပြန်သည်။ ထို့နောက် ကသာခရိုင် မြတောင်ရွာရှိ မိတ်ဆွေတဦးထံ အလည်အပတ်သွားရောက်ရာမှ မြတောင်သူ ဒေါ်စိုးနှင့် တွေ့ကာ တတိယအကြိမ် အိမ်ထောင် ကျသည်။ ဆရာကြီးမှာ ဒေါ်စိုးနှင့်ကျမှ အိမ်ထောင်ရေးဘဝ စွဲမြဲတည်ငြိမ် သွားလေတော့သည်။
ဆရာကြီးသည် အေဘီအမ်ကျောင်းတွင် ပညာဆည်းပူးနေစဉ် ၈ တန်းတွင် စာဖတ်ဝါသနာ မျိုးစေ့ကိုရခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ဂန္ထဝင်မြောက် အင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုကြီးများကို ဖတ်ရှုနိုင်သည့် အခြေသို့ရောက်ခဲ့သည်။ စွဲစွဲမြဲမြဲလည်း ဖတ်ရှု ခဲ့သည်။ စာဖတ်သက် ရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှ ဘဝအတွေ့အကြုံလည်း များလာပြီ ဖြစ်သော ဆရာကြီးသည် ဝတ္ထုရေးလိုစိတ် ထက်သန်လာသည့် အလျောက် ၁၉၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ညတွင် ‘ရန်ကြီးအောင်’ ဝတ္ထုကို စတင်ရေးသားသည်။ ရန်ကြီးအောင်မှာ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့် ရေးသောဝတ္ထု ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဇာတ်လိုက် မနှင်းမြိုင်အား ကာလသား ၄ ယောက် အလောင်းအစားပြုကာ လူပျိုလှည့်သည့် အခန်းကိုမူ ရေးနိုး (Raynolds)၏ ‘လန်ဒန်မြို့ အရှုပ်တော်ပုံ’ (The Mysteries of London) ဝတ္ထုမှ ယူခြင်း ဖြစ်သည်။ ရန်ကြီးအောင်ဝတ္ထုကို သူရိယသတင်းစာတိုက်က ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန် ရွေးချယ်ပြီး ဉာဏ်ပူဇော်ခ ငွေတရာပေးသည်။ ဤသို့ဖြင့် ဆရာကြီးသည် စာရေးဆရာ ဖြစ်လာတော့သည်။ ထို့နောက် သူရိယဦးဘဘေ၏ တိုက်တွန်းချက်အရ မစ္စက် ဟင်နရီဝု (Mrs. Henry Wood) ၏ ‘အိစလင်း’ (East Lynne) ဝတ္ထုကို မှီငြမ်းပြုကာ ‘ရတနာပုံ’ ဝတ္ထုကို ရေးသားသည်။ ထိုဝတ္ထု နှစ်ပုဒ်ကို အကြောင်းပြု၍ ဆရာကြီးကို သူရိယမဂ္ဂဇင်းတွင် အယ်ဒီတာခန့်လိုက်သည့်အတွက် စာပေလောကထဲသို့ ဝင်ရောက်ကျင်လည် ရတော့သည်။ ဆရာကြီးကို စာပေလောကထဲသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သော ‘သူရိယ’ (နေ) ၏ အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သော ‘ဒေါင်း’ ကို အစွဲပြု၍ ‘ရွှေဥဒေါင်း’ ဟူသော ကလောင်အမည်ကို ခံယူသည်။
ဆရာကြီးသည် သူရိယမဂ္ဂဇင်းတွင် အယ်ဒီတာလုပ်နေစဉ် မြန်မာဂျာနယ်သမိုင်းတွင် ပထမဆုံးဂျာနယ် ဖြစ်သော ‘မြန်မာ့ဗျူဟာဂျာနယ်’ ကို မိတ်ဆွေတဦးနှင့်ပေါင်း၍ ထုတ်ဝေခဲ့သေးသည်။
၁၉၂ဝ ပြည့်နှစ်တွင် ဆရာကြီးသည် သူရိယနှင့် မသင့်မတင့်ဖြစ်ကာ အလုပ်မှ နုတ်ပယ်ခံရသည်။ ဒေါ်စိုးနှင့် ဖူးစာဆုံပြီးနောက် ထီးချိုင့်မြို့နယ်၊ ကမ်းနီရွာ တွင် အင်္ဂလိပ်ကျောင်းဆရာအလုပ်ကို ၂ နှစ်မျှ လုပ်သေးသည်။ တရားအားထုတ်ရင်း အသက် ၃၆ နှစ်တွင် ရဟန်းဘောင်သို့ ဝင်သည်။ ရဟန်းအဖြစ် အရိုးထုတ်ရန် ကြံရွယ်သော်လည်း ငှက်ဖျားမိကာ အသည်းအသန် နာမကျန်း ဖြစ်သည့်အတွက် လူဝတ်လဲရသည်။
ဆရာကြီးသည် စာရေးခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုရင်း လခစားအလုပ်ကို ကြိုကြားကြိုကြား လုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၂၆ ခုတွင် နယူးဘားမားသတင်းစာတိုက်တွင် စက္ကရီထေရီအဖြစ် ခေတ္တဆောင်ရွက်သည်။ ၁၉၃ဝ ပြည့်နှစ်တွင် ပဲခူးမြို့ ခရစ်ယာန်စာပေအသင်း၌ ဘာသာပြန်ဆရာအဖြစ် ၃ နှစ်မျှ ဝင်လုပ်ကာ စာအုပ်ပေါင်း ၂ဝ ကျော်ခန့် ဘာသာပြန်ပေးခဲ့သည်။ ၁၉၃၆ ခုတွင် သူရိယက ပြန်ခေါ်ပြီး ဆရာကြီးကို သူရိယသတင်းစာတွင် အယ်ဒီတာခန့်သည်။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းတွင် ဆရာကြီးသည် ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာ လှုပ်ရှားရုန်းကန်ရသည်။ စစ်ပြီးခေတ်တွင် ဆရာကြီး၏ဘဝသည် အထူးပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဆရာကြီးသည် ဗုဒ္ဓ၏ စိတ္တာဝိပဿနာကို ကျနစွာ ကျင့်သုံးသည်။ လက်ဝဲစာပေ အမြောက်အမြားကိုလည်း ဖတ်ရှုသည်။ မန္တလေးရှိ လူထုသတင်းစာတိုက်တွင် အယ်ဒီတာချုပ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်စဉ် ၅ လ နီးပါးခန့် ဖဆပလအစိုးရ၏ အကျဉ်းချခြင်းကို ခံရသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း တော်လှန်ရေးအစိုးရလက်ထက်တွင် ဆရာကြီးသည် ‘လုပ်သားပြည်သူ့နေ့စဉ်သတင်းစာ’ အယ်ဒီတာချုပ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ၁၉၆၈ ခုတွင် အငြိမ်းစားယူသည်။
ဆရာကြီးသည် အနောက်တိုင်းဝတ္ထုများကို ဆီလျော်အောင် မှီငြမ်း ပြုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း မြန်မာစာပေ နယ်ပယ်ထဲသို့ ပို့ဆောင်ပေးသူ ဖြစ်သည်။ ရိုက်ဒါဟက်ဂတ် (Rider Haggard) ၏ ရှီ (She) ကို မှီငြမ်း ပြုသော ရူပနန္ဒီဝတ္ထု၊ ကိုနင်ဒွိုင်း (Conan Doyle) ၏ ရှားလော့ဟုမ်း (Sherlock Holmes) ကို မှီငြမ်း ပြုသော စုံထောက်မောင်စံရှားဝတ္ထုတို့သည် အထူး ထင်ရှားပြီး မှီငြမ်းပြုပုံ မြန်မာဆန်သည့်အတွက် အများနှစ်သက်ကြသည်။ အချို့ဆိုလျှင် မှီငြမ်းပြုမှန်းပင် မသိကြပေ။ ‘ဝင်္ကန္တ၊ ရတနာပူရ၊ ခင်စက်မေ၊ ပြည်ပေါက္ကံ၊ ဂျမဒါကိုကိုကြီး၊ ရူပကလျာဏီ၊ ပထမံဆရာသိန်း၊ ဇော်ဟိတ်’ စသည်တို့မှာ ဆရာကြီး၏ ထင်ရှားသော မှီငြမ်းပြု ဝတ္ထုများ ဖြစ်သည်။ ‘ရတနာသိုက်၊ ဗတ်စကာဗျီခွေးကြီး၊ သူရဲကောင်းသုံးယောက်၊ အန္နာကရီနီနာ၊ မျှော်တလင့်လင့်၊ ကိုယ်ရံတော်၊ စိတ်ထားဝတိံ၊ သွေးစုပ်မြေ’ စသည်တို့မှာ ဆရာကြီး၏ ထင်ရှားသော တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ဝတ္ထုများ ဖြစ်သည်။ ‘မြတ်သက်မော်’ နှင့် ‘ဆုကြီးပန်’ တို့မှာမူ ဆရာကြီး၏ ပင်ကိုရေးဝတ္ထုများ ဖြစ်သည်။ ဆရာကြီးသည် ဝတ္ထုရှည် ၅ဝ ကျော်၊ ဝတ္ထုတို ၃ဝဝ ကျော်ကို မှီငြမ်းပြု၍လည်းကောင်း၊ တိုက်ရိုက် မြန်မာပြန်၍လည်းကောင်း ရေးသားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ‘အာဟာရဖြင့်ကျန်းမာနည်း’၊ ‘အကြံဉာဏ်ဖြင့် ကြီးပွားရေး’ တို့ကိုလည်း မြန်မာ ပြန်ခဲ့သည်။ ‘ကိုယ်တွေ့တရုတ်ပြည်သစ်’ အမည်ဖြင့် ခရီးသွားမှတ်တမ်း၊ ‘တသက်တာမှတ်တမ်းနှင့် အတွေးအခေါ်များ’ အမည်ဖြင့် ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိ တို့ကို ရေးသားခဲ့သည်။ သတင်းစာခေါင်းကြီးများ၊ ဆွေးနွေးခန်းဆောင်းပါးများ၊ ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ အပါအဝင် လောကုတ္တရာဆောင်းပါးများ၊ စာပေ၊ လူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အထွေထွေဆောင်းပါးများကိုလည်း ရေးသားခဲ့သည်။
ဆရာကြီးသည် ချားလ်ဒစ်ကင်း (Charles Dicken) ၏ Great Expectation ကို မြန်မာပြန်သော မျှော်တလင့်လင့်ဝတ္ထုဖြင့် ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် စာပေဗိမာန်ဘာသာပြန်ဆုကိုလည်းကောင်း၊ အပ္ပတန် ဆင်ကလဲယား (Upton Sinclair) ၏ The Jungle ဝတ္ထုကို မြန်မာပြန်သော သွေးစုပ်မြေဝတ္ထုဖြင့် ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် စာပေဗိမာန်ဘာသာပြန်ဆုကို လည်းကောင်း၊ တသက်တာမှတ်တမ်းနှင့် အတွေးအခေါ်များ စာအုပ်ဖြင့် ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် စာပေဗိမာန် သုတပဒေသာဆုကိုလည်းကောင်း ရရှိခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ကွန်ဂရက် (မြန်မာနိုင်ငံ) ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဆိုဗီယက်ဆိုရှယ်လစ် ပြည်ထောင်စု သမ္မတနိုင်ငံတို့သို့ သွားရောက်ခဲ့ဖူးသည်။ (လုပ်သားသတင်းစာအယ်ဒီတာကို ဗန်းမော်တင်အောင်နှင့် ဗိုလ်သခင်ဆရာ တားသည့်ကြားလုပ်ခဲ့`ဗိုလ်သ္ခင်ဆရာ31st Jan2009။ `ဆရာကြီးကဒါမျိုးလုပ်ချင်တာတဲ့´ဆရာသော်တာဆွေ)
ဆရာကြီးသည် ၁၃၃၅ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၁၂ ရက် (ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၉၇၃ ခု၊ ဩဂုတ်လ ၁ဝ ရက်) သောကြာနေ့တွင် ကွယ်လွန် အနိစ္စ ရောက်သည်။ ။     
ရွှေဥဒေါင်း ရေးသား ထုတ်ဝေ ခဲ့သော စာအုပ်များ စာရင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
၁ ပထမံဆရာသိန်း ၁၉၄၉
၂ ကိုယ်ရံတော် ၁၉၅ဝ (ဘာသာပြန်)
၃ အိုင်ဗိုရီချိုင်း ၁၉၅၂
၄ ရွှေဥဒေါင်း ၁၉၅၃
၅ ရတနာပုံဝတ္ထု ၁၉၅၃
၆ သွေးစုပ်မြေ ၁၉၅၅
၇ စန္ဒာဒေဝီ ၁၉၆ဝ
၈ ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံလက်တွေ့ကျင့်စဉ် ၁၉၆ဝ
၉ စွန့်ဝံ့သူ့ ၁၉၆၁
၁၀ ရူပနန္ဒီ ၁၉၆၁
၁၁ ရန်ကြီးအောင် ၁၉၆၁
၁၂ တသက်တာမှတ်တမ်းနှင့် အတွေးအခေါ်များ ၁၉၆၁
၁၃ စုံထောက်မောင်စံရှား ၁၉၆၁
၁၄ ဂမုန်းနက် ၁၉၆၁ (ဘာသာပြန်)
၁၅ စစ်ရှုံးသူ ၁၉၆၁
၁၆ ရူပကလျာဏီ ၁၉၆၁
၁၇ ဂျမဒါကိုကိုကြီး ၁၉၆၂
၁၈ ဆွေးနွေးခန်း ၁၉၆၂
၁၉ ဒဂုန်တင့် ၁၉၆၂
၂၀ မြန်မာ့စွမ်းရည် ၁၉၆၂
၂၁ ဒေါက်တာသောင်းထိုက် ၁၉၆၂
၂၂ အကြံဉာဏ်ဖြင့် ကြီးပွားရေး ၁၉၆၂
၂၃ ဘာစကာဗျိစ်ခွေးကြီး ၁၉၆၂ (ဘာသာပြန်)
၂၅ ကိုယ်တွေ့ တရုတ်ပြည်သစ်
၂၆ ကိုယ်တွေ့ အာဟာရနှင့် ကျန်းမာရေး ၁၉၆၃
၂၇ ဂဠုန်နက်ဂိုဏ်း ၁၉၆၃
၂၈ သိန်းထိုက် ၁၉၆၄
၂၉ ဝသုံးလုံး ၁၉၆၄
၃၀ ဝင်္ကန္တ ၁၉၆၄
၃၁ ရတနာသိုက် ၁၉၆၄ (ဘာသာပြန်)
၃၂ လူစွန့်စား ၁၉၆၅
၃၃ သူတော်စိန် ၁၉၆၅
၃၄ ဆုကြီးပန်နှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ ၁၉၆၅
၃၅ စော်လမွန်သိုက် ၁၉၆၅
၃၆ ကလယန္တရား ၁၉၆၅
၃၇ ချစ်ပန်းပွင့် ၁၉၆၅
၃၈ စေတလုံးပိုင်ရှင်နှင့် အခြားဝတ္ထုများ ၁၉၆၅
၃၉ ဇော်ဟိတ် ၁၉၆၅
၄၀ ဘာသာရေး ခံယူချက် ၁၉၆၅
၄၁ ထိပ်ထိပ်ကြဲ လျှို့ဝှက်သည်းဖို ဝတ္ထုများ ၁၉၆၆
၄၂ ဒေါင်ဒေါင်မြည် လျှို့ဝှက်သည်းဖို ဝတ္ထုတိုများ ၁၉၆၆
၄၃ ဇတ်ဇတ်ကြဲဂိုဏ်း ၁၉၆၆
၄၄ ဟစ်တလာ လုပ်ခဲ့သမျှ ၁၉၆၈ (ဘာသာပြန်)
၄၅ မျှော်တလင့်လင့် ၁၉၆၉ (ဘာသာပြန်)
၄၆ စာရေးနည်း လမ်းညွှန် ၁၉ရဝ
၄၇ လွမ်းအောင်ဖန် ၁၉ရဝ
၄၈ စိတ်ထားဝတိံနှင့် မြန်မာ့စွမ်းရည် ၁၉၇၅
၄၉ စုံထောက် ဦးစံရှား ပေါင်းချုပ် ၁၉၇၇
၅၀ စိတ်ထားတော် (ဘာသာပြန်)
၅၁ ဗုဒ္ဓဝါဒနှင့် အယူအဆရေးရာများ
၅၂ မြသက်မော် ၁၉၅၁
၅၃ ရှိတ်စပီးယား ပြဇာတ် ဝတ္ထုများ (ဘာသာပြန်)
၅၄ လောကုတ္တရားရာ ဆွေးနွေးခန်းများ ၁၉၆၉
၅၅ လက်တွေ့လျှိုစစ် ၁၉၆၅
၅၈ လျှမ်းလျှမ်းတောက် လျှို့ဝှက်သည်းဖို ဝတ္ထုများ
၅၉ သူရဲကောင်း သုံးယောက် (ဘာသာပြန်)
၆၀ အတွေးအခေါ် ဟင်းလေးအိုးကြီး
ရွှေဥဒေါင်း ရေးသား ထုတ်ဝေ ခဲ့သော စာအုပ်များ စာရင်း (မူကွဲ[ပြင်ဆင်ရန်]
၁ ရတနာပုံဝတ္ထု ၁၉၁၇ သူရိယသတင်းစာတိုက်
၂ ရူပနန္ဒီ ၁၉၁၉ သူရိယသတင်းစာတိုက်
၃ ရန်ကြီးအောင် ၁၉၅၂ သူရိယသတင်းစာတိုက်
၄ ဝင်္ကန္တဝတ္ထု ၁၉၂၆ သူရိယသတင်းစာတိုက်
၅ သိန်းထိုက်ဝတ္ထု ၁၉၂၆ သူရိယသတင်းစာပုံနှိပ်တိုက်
၆ ဂျမဒါကိုကိုကြီး ပထမတွဲ ၁၉၃၈ ဒေါ်အုန်းသင်နှင့်သားများ
၇ ရူပကလျာဏီ ၁၉၃၈ လောကံာကုမ္ပဏီလီမီတက်
၈ အဘရဟမ်လင်းကွန်း ၁၉၃၉ နဂါးနီ
၉ ဝသုံးလုံး (၁၉၃၉-၄၀) ကြီးပွားရေး
၁၀ ဟစ်တလာလုပ်ခဲ့သမျှ (၁၉၃၉-၄၀) နဂါးနီစာအုပ်တိုက်
၁၁ ရန်ကုန်မင်္ဂလာနှင့် သူတော်ကောင်းကြီး ၁၉၄၁ ဂျာနယ်ကျော်
၁၂ စွန့်ဝံ့သူ (ပထမပိုင်း) ၁၉၄၅ ကြီးပွားရေး
၁၃ အာဟာရဖြင့် ကျန်းမာနည်း ကုသနည်းများ ၁၉၄၉ ကြီးပွားရေး
၁၄ မြတ်သက်မော် ၁၉၅၁ သွေးသောက်တိုက်
၁၅ ကိုယ်တွေ့ တရုတ်ပြည်သစ် ၁၉၅၃ မန္တလေးကြီးပွားရေး
၁၆ ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ လက်တွေ့ကျင့်စဉ် ပ-နှိပ် ၁၉၆၀ ရှုမဝတိုက်
၁၇ ရွှေဥဒေါင်း ၁၉၅၃ ကြီးပွားရေး
၁၈ စစ်ရှုံးသူ ၁၉၆၁ မာလာမြိုင်ပုံနိုပ်တိုက်
၁၉ တစ်သက်တာမှတ်တမ်းနှင့် အတွေးအခေါ်များ ပထမတွဲ ၁၉၆၁ ကြီးပွားရေး
၂၀ တစ်သက်တာမှတ်တမ်းနှင့် အတွေးအခေါ်များ ဒုတိယတွဲ ၁၉၆၁ ကြီးပွားရေး
၂၁ တစ်သက်တာမှတ်တမ်းနှင့် အတွေးအခေါ်များ တတိယတွဲ ၁၉၆၁ ကြီးပွားရေး
၂၂ တစ်သက်တာမှတ်တမ်းနှင့် အတွေးအခေါ်များ စတုထ္ထယတွဲ ၁၉၆၂ ကြီးပွားရေး
၂၃ ဆွေးနွေးခန်း ၁၉၆၂ မိုးဦးပန်းစာပေ
၂၄ ဒဂုံတင့် သော်တာစာပေ ၁၉၆၂
၂၅ ၂၅။ မြန်မာ့စွမ်းရည် မြန်မာပြည် ၁၉၆၂
၂၆။ ဗုဒ္ဓဝါဒနှင့် အယူအဆရေးရာများ ထပ်မံတင်ပြချက် ချိုးဖြူစာပေ ၁၉၆၃
၂၇။ ကာလယန္တရား အလိမ္မာစာပေ ၁၉၆၅
၂၈။ ချစ်ပန်းပွင့် အလိမ္မာစာပေ ၁၉၆၅
၂၉။ စေတလုံးပိုင်ရှင်နှင့် အခြားဝတ္ထုများ အလိမ္မာစာပေ ၁၉၆၅
၃၀။ ဆုကြီးပန်း အလိမ္မာစာပေ ၁၉၆၅
၃၁။ ဇော်ဟိတ် နှလုံးလှစာပေ ၁၉၆၅
၃၂။ ဘာသာရေး ခံယူချက် ပုဂံစာအုပ်တိုက် ၁၉၆၅
၃၃။ လူစွန့်စား အောင်မြင့်စာပေ ၁၉၆၅
၃၄။ သူတော်စိန် နှလုံးလှစာပေ ၁၉၆၅
၃၅။ ဇာတ်ဇာတ်ကြဲဂိုဏ်း ရန်အောင်မင်္ဂလာ အလိမ္မာစာပေ ၁၉၆၆
၃၆။ လောကုတ္တရာရေးရာဆွေးနွေးခန်းများ (ဘာသာရေးခံယူချက်ကို ဒုကြိမ်ရိုက်) ပင်းယစာပေတိုက် ၁၉၆၇
၃၇။ စာပဒေသာ ခြင်္သေ့စာပေ ၁၉၆၇
၃၈။ ရူပနန္ဒီ-ရူပကလျာဏီ အလိမ္မာစာပေ ၁၉၆၉
၃၉။ စာရေးနည်းလမ်းညွန် စာနိုင်ငံစာပေတိုက် ၁၉၇၀
၄၀။ ဇာတ်ဇာတ်ကြဲဂိုဏ်း ဒု-နိုပ် မိုးစပယ်စာပေ ၁၉၇၀
၄၁။ လွမ်းအောင်ဖန် ဒု-နိုပ် စိမ်းမြအနုပညာစာပေ ၁၉၇၀
၄၂။ စိတ်ထားဝတိံနှင့် မြန်မာ့စွမ်းရည်( တ-နှိပ် ) ပန်းချီစာပေ ၁၉၇၅
၄၃။ သုံးပေါက်ချွန်းနှင့် ဝတ္ထုတိုများ ရာပြည့်စာအုပ်တိုက် ၂၀၀၂
၄၄။ ယောက်ျားဘသား ဖူးပွင့်ဝေဝေ ၂၀၀၃
၄၅။ အတွေးအမြင်နှင့် ရှုထောင့် စိတ်ကူးချိုချို ၂၀၀၄
၄၆။ ကြမ်းလိုက်တဲ့တောနှင့် အခြားတစ္တေပုံပြင်များ ခွန်းနှင့်ရွှန်း စာပေ ၂၀၀၅
၄၇။ လူဖြစ်ရကျိုးနပ်ပါစေနှင့် အခြား အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးများ စိတ်ကူးချိုး ၂၀၀၅
၄၈။ ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ် ပထမတွဲ စိတ်ကူးချိုချို ၂၀၀၆
၄၉။ ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ် ဒုတိယတွဲ စိတ်ကူးချိုချို ၂၀၀၆
၅၀။ ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ် တတိယတွဲ စိတ်ကူးချိုချို ၂၀၀၆
၅၁။ ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ် စတုတ္ထတွဲ စိတ်ကူးချိုချို ၂၀၀၆
၅၂။ ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ် ပဥ္စမတွဲ စိတ်ကူးချိုချို ၂၀၀၆
၅၃။ ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ် ဆဋ္ဌမတွဲ စိတ်ကူးချိုချို ၂၀၀၆
၅၄။ ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ် သတ္တမတွဲ စိတ်ကူးချိုချို ၂၀၀၇
၅၅။ ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ် အဋ္ဌမတွဲ စိတ်ကူးချိုချို ၂၀၀၇
၅၆။ စစ်ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံနှင့် အတွေးအခေါ်ဆောင်းပါးများ စိတ်ကူးချိုချို ၂၀၀၈
၅၇။ ဖူးစာနှစ်ခိုင်၊ အသစ်စုံထောက်၊ စွန့်ဝံ့သူ၊ စန္ဒာဒေဝီ စိတ်ကူးချိုချို ၂၀၀၈
၅၈။ ကျွန်ုပ်တွေ့သော စိတ်သဘာဝ စိတ်ကူးချိုချို ၂၀၀၈
၅၉။ ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ် နဝမတွဲ စိတ်ကူးချိုချို ၂၀၀၉
၆၀။ ဂြိုဟ်မွှေးတဲ့ငွေ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်စာပုံနှိပ်တိုက်(နေ့စွဲမပါ)
၆၁။ ဗုဒ္ဓဝါဒနှင့် တွေးခေါ်မြော်မြင်ရေး ချိုးဖြူစာပေ (နေ့စွဲမပါ)
၆၂။ ဗုဒ္ဓဝါဒနှင့် အယူအဆရေးရာများ ဂျိုးဖြူစာပေ (နေ့စွဲမပါ)
၆၃။ ပထမံ- ဆရာသိန်း (ပ-တွဲ) ကြီးပွားရေး (နေ့စွဲမပါ)၁၉၄၀?
၆၄။ ပထမံ- ဆရာသိန်း (ဒု-တွဲ) ကြီးပွားရေး (နေ့စွဲမပါ)၁၉၄၁?
၆၅။ အတွေးအခေါ်ဟင်းလေးအိုးကြီး နေပြည်တော် (ခုနှစ်မပါ)
၇၀။ ရူပနန္ဒီနှင့် ဘိုးဘိုးအောင်
၁ ၁။ စုံထောက်မောင်စံရှား ဒုတိယအုပ် ဒေါ်အုန်းသင်နှင့်သားများ ၁၉၃၉
၂။ စုံထောက်မောင်စံရှား တတိယအုပ် ဒေါ်အုန်းသင်နှင့်သားများ ၁၉၄၀
၃။ ဒေါက်တာသောင်းထိုက် နဂါးနီ ၁၉၄၀
၄။ ရတနာသိုက် ပထမတွဲ ဒဂုန်ခင်ခင်လေး ၁၉၄၀
၅။ ရတနာသိုက် ဒုတိယတွဲ ဒဂုန်ခင်ခင်လေး ၁၉၄၀
၆။ စုံထောက်မောင်စံရှား စတုတ္ထအုပ် ဒေါ်အုန်းသင်နှင့်သားများ ၁၉၄၁
၇။ စောလမုန်သိုက် တိုင်းပြည်ပြုပုံနှိပ်တိုက် ၁၉၄၁
၈။ အကြံဉာဏ်ဖြင့် ကြီးပွားရေး ပထမပိုင်း ကြီးပွားရေး ၁၉၄၅
၉။ ဂမုန်းနက် ကြီးပွားရေး စာအုပ်တိုက် ၁၉၄၇
၁၀။ ဘတ်စကာဗျီလ်ခွေးကြီး ကြီးပွားရေး ၁၉၄၇
၁၁။ ဂဠုန်နက်ဂိုဏ်း ရှုမဝတိုက် (ခုနှစ်မပါ)
၁၂။ သူရဲကောင်းသုံးယောက် ဒုတိယတွဲ ကြီးပွားရေး ၁၉၄၈
၁၃။ ကိုယ်ရံတော် ပြည်သူ့အလင်းစာပေ ၁၉၅၀
၁၄။ မြှော်တလင့်လင့် ရှုမဝ ၁၉၅၀
၁၅။ စိတ်ထားဝတိံ ကြီးပွားရေး ၁၉၅၁
၁၆။ အိုင်ဗိုရီချိုင်းလ် ထွန်းရင်ပုံနှိပ်အလုပ်ဌာန ၁၉၅၂
၁၇။ သွေးစုတ်မြေ ရှုမဝစာအုပ်တိုက် ၁၉၅၅
၁၈။ အိုင်ဗင်ဟို ဟံသာဝတီပုံနှိပ်တိုက် ၁၉၅၅
၁၉။ ဆင်စွယ်မင်းသမီး ဒု-နှိပ် မြန်မာပြည်ပုံနှိပ်တိုက် ၁၉၆၂
၂၀။ စုံထောက်မောင်စံရှား ပထမအုပ် ဒု-နှိပ် မြန်မာပြည် ၁၉၆၀
၂၁။ စုံထောက်မောင်စံရှား ပဥ္စမအုပ် ဒု-နှိပ် မြန်မာပြည် ၁၉၆၀
၂၂။ လက်ထက်တော်ကြီး ရဲရင့်စာပေ ၁၉၆၀
၂၃။ စုံထောက်မောင်စံရှား ဆဋ္ဌမအုပ် မြန်မာပြည် ၁၉၆၁
၂၄။ စုံထောက်မောင်စံရှား သတ္တမအုပ် မြန်မာပြည် ၁၉၆၁
၂၅။ စုံထောက်မောင်စံရှား အဋ္ဌမအုပ် မြန်မာပြည် ၁၉၆၁
၂၆။ စုံထောက်မောင်စံရှား ဒဿမအုပ် မြန်မာပြည် ၁၉၆၁
၂၇။ စုံထောက်မောင်စံရှား ဧကာဒဿမအုပ် မြန်မာပြည် ၁၉၆၁
၂၈။ စုံထောက်မောင်စံရှား ဒွါဒဿမအုပ် မြန်မာပြည် ၁၉၆၁
၂၉။ စုံထောက်ဦးစံရှား ပထမအုပ် အလိမ္မာစာပေ ၁၉၆၆
၃၀။ စုံထောက်ဦးစံရှား ဒုတိယအုပ် နှလုံးလှစာပေ ၁၉၆၆
၃၁။ စုံထောက်ဦးစံရှား တတိယအုပ် အလိမ္မာစာပေ ၁၉၆၇
၃၂။ စုံထောက်ဦးစံရှား စတုတ္ထအုပ် သစ္စာမွန်စာပေ ၁၉၆၇
၃၃။ စုံထောက်ဦးစံရှား ပဥ္စမအုပ် သစ္စာမွန်စာပေ ၁၉၆၇
၃၄။ စုံထောက်ဦးစံရှား ဆဋ္ဌမအုပ် သစ္စာမွန်စာပေ ၁၉၆၈
၃၅။ စုံထောက်ဦးစံရှားပေါင်းချုပ် ပုဂံစာအုပ်တိုက် ၁၉၇၄
၃၆။ စုံထောက်မောင်စံရှား ပေါင်းချုပ် ယနေ့မန္တလေးစာအုပ်တိုက် ၂၀၀၀
၃၇။ ဦးစံရှား ဖြေရှင်းခဲ့သော ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ မှုခင်းကြီးများ ဖူလုံးစာပေ ၂၀၀၅
၃၈။ စုံထောက်မောင်စံရှား- ရန်ကိုရန်ချင်း မြန်မာ့ရှပ်ရှင်ဝတ္ထုတိုက် (နေ့စွဲမပါ)
၃၉။ ရှိုတ်စပီးယား၏ ပြဇာတ်ဝတ္ထုများ သွေးသောက်တိုက် (နေ့စွဲမပါ)
၄၀။ စုံထောက်မောင်စံရှား ပွေလီအင်းခွေးကြီးအမှု
ဆရာကြီး၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်စိုး မသေခင် ရွှေဥဒေါင်းစာမူကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သေတမ်းစာရေးခဲ့သည်။
သေတမ်းစာအရ စာမူများအတွက် ရသောငွေများကို-
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် တို့လေးဦး တိုင်ပင်ပြီး သင့်တော်သည့် လူငယ်စာရေးဆရာများအား သင့်တော်သလို စဉ်းစားပြီး သင့်တော်သည့် စာပေဆုများပေးဖို့ ကျွန်မက တာဝန်လွှဲအပ်ခဲ့သည်။
(ဒေါ်ကြီးစိုး၊ ကမ်းနီရွာ၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ်၊ ကသာခရိုင်) 
၁၉၅၂ ခုနှစ် က တရုတ်နိုင်ငံ ပီကင်း ပစိဖိတ်ဒေသ ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ဖရင့် သို့ ရွှေဥဒေါင်း၊ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၊ လူထုဦးလှ တို့ အတူ တက်ရောက်ခဲ့စဉ်
↑ ၂၀ ရာစု မြန်မာဝတ္ထုတို ၁၀၀ စာရေးဆရာ ၁၀၀၊ သီဟရတနာအုပ် ၁ဝဝပြည့် အထူးထုတ်
↑ ပဉ္စမအကြိမ် ၁၊ ဩဂုတ်၊ ၂ဝဝ၂၊ ရာပြည့် စာအုပ်တိုက်ထုတ် 'စာဆိုတော်များ အတ္ထုပ္ပတ္တိ' က ရွှေဥဒေါင်း (၁၂၅၁ - ၁၃၃၅) အကြောင်း - မောင်သုတ အမည်ခံ ဗိုလ်မှူး ဘသောင်း (မဟာ ဝိဇ္ဇာ၊ ရွှေတံဆိပ်ရ)
↑ တိုက်စိုးနှင့် မင်းယုဝေ။ စာဆိုနှင့် သုတေသီ။ စာ ၁၇၇ - ၂ဝ၂
↑ မလိခ။ မြန်မာဝတ္ထု အညွှန်း ၂။ စာ ၁၃ - ၁၇။
↑ ဒဂုန် ရွှေမျှား။ မြန်မာနိုင်ငံ စာပေဆုများ။ စာ ၄၁ - ၄၂။
↑ ရွှေဥဒေါင်း။ တသက်တာ မှတ်တမ်းနှင့် အတွေးအခေါ်များ။
↑ လုပ်သားပြည်သူ့ နေ့စဉ် သတင်းစာ။ ၆ - ၈ - ၇၃။ ။
↑ သော်တာဆွေ၏ ကျွန်တော့်ဘဝဇာတ်ကြောင်း(၄)မှ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရွှေဥဒေါင်း&oldid=714029" မှ ရယူရန်
မြန်မာ အမျိုးသား စာရေးဆရာများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။